အပျိုရှမ်းမလေး – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 4, 2021 Author admin	Comments Off on အပျိုရှမ်းမလေး
ကျွန်တော်နာမည် မောင်မောင်ဖြစ်ပြီး အသက်က၂၆နှစ်ပါ …ကျွန်တော်သည် companyတစ်ခုက၀န်ထမ်းဖြစ်သောလည်း..အပိုလက်ဖက်ရည်ဖိုးခရီးသွားဖို့ အစရှိသောဘေးပေါက်အလုပ်ကလေးတွေလုပ်ရန်အတွက်ဌာအပိုအလုပ်တစ်ခု လုပ်ပါတယ် ဒီအလုပ်ကတော့ အရပ်အခေါ်ယောကျာ်းဖာခေါင်း (…မိမိကိုယ်ကိုတော့ဖြည့်ဆည်းပေးသူတစ်ယောက်ဟုခံယူ)ဖြစ်ပါတယ်…..ကျွန်တော်သည်ငယ်ကတည်းကလိင်ကိစ္စအင်မတန်ဝါသနာကြီးပြီး လိင်တန်ဆာမှာလည်း တချို့အောစာအုပ်များမှာကဲ့သို့ ၈လက်မ ၇လက်မမရှိပါ ၅လက်မခွဲသာသာရှိပါသည်…သို့သော်လိုးနေရရင်ရွံရွာမူမရှိအကုန်ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးခြင်း ဆေးလိပ်အရက် ရှောင်ရှားခြင်း..(အရင်ကတော့ဆေးလိပ်သောက်တယ်ဗျ ဒါမယ့်လိုးတယ့်အချိန်သိသာတယ်..မောတယ် တခါတလေမတောင်နိုင်တာ..မောတာ..၂ချီ ၃ချီမဆွဲနိုင်တာရှိတော့ဘဒိုတို့ကိုဆေးလိပ်ဖြတ်စေချင်တယ်ဗျာ) ……ထမင်းစားရာတွင် လိင်ကျန်းမာရေးအတွက်ကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူပုံမှန်စားပေးခြင်း )စသည်တို့ကြောင့် ဖောက်သည်အများအပြားလက်ခံရရှိပါတယ် ဒီထဲမှမိမိကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးသူများကိုရေးသားဖော်ပြပါမည်…တစ်နေ့ မိမိသူငယ်ချင်းများနှင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေထိုင်နေစဉ် ဖုန်းဝင်လာသောကြောင့် နားထောင်လိုက်ရာ …( မိမိမှာကိုယ်ပိုင်နာမည်မသုံးဘဲ မောင်မောင်ဆိုတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းခံဖောက်သည်များအတွက်သုံးသောနာမည်ဖြစ်သည် ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှာလည်းမောင်မောင်အကောင့်တုဖြစ်ပြီးမိတ်ဆွေတို့လိုရင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်) … ‘ဟယ်လို…မောင်မောင်ဆိုတာလားရှင့်” တစ်ဘက်မှအလိုချိုမြိန်သောအသံနှင့်……. ဟုတ်ကဲ့…ခင်မျ..ကျွန်တော်မောင်မောင်ပါ … ‘မောင်မောင်ကလေ …ဟိုဟာလည်းမသိရှင့်….” ဘယ်ဟာလည်းခင်မျ ……… ‘ဖာခေါင်းလားမသိရှင်…..’ ဟာဗျာ ဒဲ့တိုးကြီး..။ ဟုတ်ပါတယ် ခင်မျ….. ဘယ်နေ့အားလဲမသိဘူးရှင့် …. ရပါတယ် ဒီကအမအားတဲ့အချိန်ပြောပါ…… ဟုတ်ကဲ့ ဒီအပတ်တနင်္ဂနွေနေ့လည် ၁၂နာရီလောက်လေတစ်ခုခုစားသောက်ပြီး အလုပ်ဖြစ်မလားမသိရှင့် ..အင်း…ရပါတယ်ခင်မျ…. […]